Wasiirka Hawlaha Guud ee XfS oo kulan la yeeshay shirkadda dhisaysa Waddada Muqdisho iyo Afgooye | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wasiirka Hawlaha Guud ee XfS oo kulan la yeeshay shirkadda dhisaysa Waddada Muqdisho iyo Afgooye
Wasiirka Wasaaradda Hawlaha guud, dib u dhiska iyo guriyeyta XFS Mudane Xil. Maxamed Aadan Macalim (Somali) ayaa maanta kulan isbarasho iyo is xog-waraysi ah xafiiskiisa waxaa uu kula yeeshay madaxa guud ee Shirka dhismaha Turkiga ah ee ANEZ Company oo ah Shirkadda dhisaysa Waddada Muqdisho iyo Afgooye.
Wasiir Maxamed Soomaali ayaa waxaa uu ka waraystay halka uu marayo dhismaha waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, waxa uga harsan iyo Caqabadaha ay lakulmeen intii uu socday dhismaha Waddadan iyo sidii loo bilaabi lahaa dhismaha Waddada Muqdisho iyo Jowhar.
Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud Maxamed Aadan Macalim ayaa ugu dambayntii waxaa uu bogaadiyey shaqada culus ee ay hayso shirkadda ANEZ, waxana uu uga tacsiyeeyay dhamman shaqaalihii ku dhintay intii ay socotay shaqada dhismaha Waddada gaar ahaan Injineeradii Turkida ahaa, Inta ku dhaawacantayna waxaa uu u rajeeyey in allaah caafimaad deg deg siiyo.
Wasiirka Hawlaha Guud ee XfS oo kulan la yeeshay shirkadda dhisaysa Waddada Muqdisho iyo Afgooye was last modified: December 8th, 2020 by Admin